Fizahan-tany Marijuana: tsenan'i Seychelles tsy voatanisa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany Marijuana: tsenan'i Seychelles tsy voatanisa
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny sasany ao amin'ny Seychelles fantatra amin'ny fidorohana rongony fialam-boly, ny fandraràna mitohy dia ny fomba fitenin'ny governemanta manao hoe: ataovy izay lazaiko, aza manao tahaka ny ataoko. Amin'izao fitsanganan'ny referandaoma any Nouvelle-Zélande izao momba ny fanajanonana ara-dalàna ny marijuana, efa niresaka mafy momba ny lohahevitra ny praiminisitra teo aloha Helen Clark nilaza fa maniry ny handanian'ilay fitsapan-kevi-bahoaka satria hampitsahatra ny fandrarana ny zava-mahadomelina malaza izany mba tsy hahazoan'ny olom-pirenena. famatsiana avy amin'ny “trano vaventy.” Ity dia eo am-panokafana ny lalana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany marijuana.
Nanamafy izy fa ny mpanao politika antitra izay miantso fandrarana dia matetika Boomers izay nihatsaravelatsihy nampiasa ny zava-mahadomelina tamin'ny andron'ny anjerimanontolo. Nanampy izy fa ny antony nanjary tsy ara-dalàna tamin'ny voalohany, raha tsy ny paraky sy ny alikaola dia satria nampiasaina betsaka tamin'ny "fiarahamonina tandrefana mahery" ity rongony ity fa malaza kosa ny rongony any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
Clark dia nanambara ihany koa: "Efa ela aho no nahafantatra fa rehefa miteny amin'ny tanora ianao hoe: 'aza manao an'izany, dia manao izy. Izany no toetran'ny tanora. … Hampiasa an'io ny olona. … Tsy toy izany ny hadalan'adala. Firenena maro no niasa… fa ny fiezahana mandrara ny fampiasana zavatra hatramin'ny 80 isanjaton'ny New Zealand dia hanandrana mandritra ny androm-piainany dia mampihomehy tokoa. … Ka tsara kokoa ny miatrika izany amin'ny tombotsoany, amin'ny porofo, ekeo fa amin'ny zava-mahadomelina dia tsy dia atahorana loatra amin'ny fahasalamanao noho ny fifohana sigara, ary tsy dia atahorana ho an'ny fahasalamanao sy ny fiaraha-monina misy anao noho ny alikaola, ary mametraka fitsipika vitsivitsy manodidina azy… atao ara-dalàna ary araraoty. Mametraha lalàna manodidina azy, esory amin'ny tsena mainty, ary tanteraho ny andraikitrao amin'ny fanjakana. ”
Miaraka amin'ny indostrian'ny fizahantany Seychelles mila fampivoarana noho ny Covid-19, Seychelles dia mila famerenanana marika indray na fantsona farafaharatsiny mba hisarihana ny mpizahatany ho any amorony indray. Ny fizahan-tany Marijuana dia tsena tsy voatanisa ho an'i Seychelles miaraka amin'ireo mpizahatany maro izay mirohondrohona mankamin'ny toeran-kaleha heverina ho "sariaka ahitra."
Ny toekarena mitolona amin'izao fotoana izao dia afaka mahazo tombony amin'ny vola rehetra mivoaka amin'ny tsena mainty mankany amin'ny rafitra ofisialy, amin'izay mamela ny governemanta hanangona vola miditra amin'ny hetra avy amin'ny indostria. Ny fidiram-bola avy amin'ny fizahan-tany marijuana dia azo ampiasaina hamatsiana vola amin'ny fanatsarana fotodrafitrasa ilaina ao anatin'izany ny lalana, rano, sekoly, hopitaly ary tobim-pahasalamana.
Tamin'ny 2015, telo taona taorian'ny nanaovan'i Colorado ara-dalàna ny marijuana fialamboly, ny Biraon'ny fizahan-tany any Colorado dia nanao fanadihadiana izay nanambara fa efa ho 50 isan-jaton'ny mpitsidika ny fanjakana no voataona amin'ny fisian'ny marijuana. Colorado dia voalaza fa nahita fitomboan'ny fandaniam-bolan'ny fizahan-tany taona lasa hatramin'ny nanekena ho ara-dalàna ary mbola mitohy mahita fiakarana marobe amin'ny fandaniana amin'ny mpanjifa ihany koa.
Ny fomba tokana handrosoana dia amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy ny fomba fitantanana vaovao. Miaraka amin'ny toekaren'ity firenena ity amin'ny fanjakana misy azy ankehitriny, dia efa lasa ny fotoana hilalaovana azy io ho fahatahorana sy fahatahorana be loatra hampiakarana ny sambo. Ny antsasaky ny mponina dia nitaraina tamin'ny "fanovana" nandritra ny taona maro. Tonga ny fotoana hanaovana ara-dalàna ny marijuana sy ny fizahantany marijuana - afaka mampiasa ity mpamatsy vola vaovao ity ny indostrian'ny fizahantany.